လွှတ်တော် ချွတ်ချော်မှာလား.. Deficient | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » လွှတ်တော် ချွတ်ချော်မှာလား.. Deficient
လွှတ်တော် ချွတ်ချော်မှာလား.. Deficient
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Apr 23, 2012 in Opinions & Discussion | 11 comments
ဒီနေ့ဧပြီ၂၃ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ပြန်စနေပြီ။ ငါးရက်ပဲ ကြာမယ်ပြောတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေ မပါသေးဘူး။ ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီက ကျမ်းကျိန်တဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်း ပြင်ပေးဖို့ အဆိုတင်မယ်ပြောတယ်။ ကြံ့ဖွတ်နဲ့စစ်ဗိုလ် အများစု ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လွှတ်တော်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှာလည်း ကြည့်ရမယ်။ အန်အယ်လ်ဒီ လွှတ်တော်တက်မတက် အခုအချိန်အထိ ပြသနာ မရှိသေးပါ။ အစည်းအဝေးဖိတ်စာရတော့ မျှော်လင့်မထား အံ့ဩမိကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်ပြောဖူးလို့ စစ်တပိုင်း အစိုးမရဘက်က သွေးတိုးစမ်းလိုက်တာ ဖြစ်ဖို့များတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမှာကြ အသုံးအနှုန်းကို ပြင်ပေးရင် လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း ပြင်မပေးနိုင်စရာ မရှိပါ။ အခုအချိန်အထိ နှစ်ဖက်စလုံး မိမိတို့လိုလားချက်များကို ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ အဆင့်ဖြစ်နေတယ်။
နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ စိုးရိမ်ပူပန်မှု သိပ်မပြဘူး။ တကယ်လည်း နိုင်ငံရေး ကစားနေကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ သိပ်တော့လှုပ်ရဲမယ်မထင်၊ နိုင်ငံတကာ အကူအညီ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေက ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်နေတယ်ပြောပြီး မယ်မယ်ရရ လုပ်ဆောင်မှုမရှိ၊ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ညှိနှိုင်းဖို့ အနေအထား မပြနိုင်ရင် ရထားသမျှလေးတွေ ပြန်အန်ထုတ်ရလိမ့်မယ်။ စစ်ဗိုလ်ဂျီးတွေနဲ့ သူတို့ အပေါင်းအပါတွေက အခုမှစားဖို့ ပါးစပ်တပြင်ပြင် ဖြစ်နေတုန်းရှိသေးတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီကို ဘာညာနဲ့ ဝေဖန်ကြမည့် စစ်တပ်အောက်ဆွဲများလည်း အခြေအနေ တကယ်တင်းမာလာရင် လေသံလျှော့သွားလိမ့်မယ်။ သူတို့ ရထားတဲ့ နေရာလေးတွေ အပျောက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အန်အယ်လ်ဒီအတွက်ကတော့ အခုအချိန်မှာ နည်းနည်း သက်သာလာတာပဲရှိတယ်။ နောင်တချိန် လုပ်ပိုင်ခွင့် များများစားစား ရသွားရင်တော့ မပြောတတ်ပါ။ ဒီတော့ စွန့်ပျော်တယ်၊ စွန့်နိုင်ဖို့ အခြေအနေလည်း ပေးတယ်။
စစ်တပိုင်းလွှတ်တော် ဘူးခံနေရင် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုတာ မျှော်လင့်ချက် မရှိပါ။ ဒေါ်စုနဲ့ ဦးသိန်းစိန် ဆွေးနွေးပွဲ ဘယ်ကိုဦးတည်နေသလဲ ပြန်ဆန်းစစ်ရမယ်။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် တာဝန်ခံထားတာမို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်းပြည်ကို တင်ပြရမယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသည် ကြံ့ဖွတ်အတွက် ပကတိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို မြင်ရတဲ့ အာဏာရပ်တည်မှုကို မထိခိုက်တဲ့ အခွင့်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သလို အခုအရေးသည် အန်အယ်လ်ဒီအတွက် စစ်တပိုင်းလွှတ်တော် ရပ်တည်ချက်ကို ရှင်းလင်းစွာ သိနိုင်တဲ့ အခါကောင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရက်တစ် အဖွဲ့များအကြားမှာလည်း အချင်းချင်း ပြန်လေ့လာနိုင်တယ်။ အခုပဲ အန်အယ်လ်ဒီမျက်နှာနဲ့ ၂၀၁၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အချောင်အနိုင်ရ အန်အယ်လ်ဒီပဲ့ထွက် ကိုယ်စားလှယ်တချို့ ဝေဖန်နေကြပြီ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ ရှေ့ခရီးဆက်တဲ့အခါ မဟာမိတ်များအဖြစ် ဆက်ဆံရမှာ..။
ကျနော်ကတော့ အန်အယ်လ်ဒီ မတက်ဘဲ ကျမ်းကျိန်တဲ့ ကိစ္စကို စစ်တပိုင်းလွှတ်တော်ကို လွှဲပေးလိုက်တာ သဘောကျတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၅%က သဘောတူပေးလိုက်ရင် ပြီးပြီ။ အန်အယ်လ်ဒီ ဝင်လူမိုက် လုပ်စရာမလိုဘူး။ အဲလိုဖြစ်အောင် စစ်တပိုင်းအစိုးမရက လုပ်လိုက်တယ်ထင်တယ်။ တချို့ကလည်း ဒေါ်စုအနေဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို သိပ်ကပ်လွန်းတယ်၊ လွှတ်တော်နဲ့လည်း နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံဖို့လိုတယ် ဝေဖန်တယ်။ လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ.. သို့ပေမည့် လူတိုင်းကို ပျော်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင် လက်တွေ့မကြဘူး။ လွှတ်တော်ငှက်ကထတွေကို သွားဖြဲပြပြီးတော့ရော လုံလောက်ပြီလား။ မထင်နဲ့ ကာချုပ်၊ အခြေခံဥပဒေခုံရုံး၊ မတရားသူဂျီးချုပ် စတဲ့ လူမိုက်ပေါင်းစုံ ကျန်သေးတယ်။ သူတို့က မလိုအပ်သေးလို့ ဝပ်နေဂျတာ။ လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ အားပြိုင်တယ်လား ရွာလူဂျီး ဦးမိုးညို ပြောသလို bipartisanship လားဆိုတာ မျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုတယ်။ သူတို့ ဖွဲ့စည်းပုံသည် top down အထက်အောက် ဆက်ဆံရေးဖြစ်လို့ ထိပ်ဆုံးလူအပေါ်မှာပဲ အဆုံးအဖြတ်တည်တယ်။ အောက်ခြေလူဂျီးများ စကားများတာ အရက်ဝိုင်း၊ ဖဲဝိုင်းမှာ ရန်ဖြစ်တာထက်မပိုပါ။
ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေရဲ့ အကြီးအကဲတွေလဲ လာသွားကြပီ…
ပိတ်ဆို့မှု့တွေကို ဖြေလျှော့တန်သလောက်လည်း ဖြေလျှော့နေပီ..
ဟောအခုလေးတင်ဘဲ ဦးသိန်းစိန် ဂျပန်သွားလည်လို့ ဂျပန်အစိုးရက
ကြွေးမြီ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းသုံးထောင့်ခုနှစ်ရာကျော် လျှော်ပေးလိုက်ပြီ..
နိုင်ငံတကာကလည်း ရင်းနှီးမှုတ်နှံမှု့တွေ လုပ်ဘို့တာစူနေပီ..
ခုတောင်းဆိုတဲ့ စကားရပ်ပြင်ဆင်ပေးပါဆိုတဲ့ NLD ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းအပေါ်
အမေစုကတော့ပြောတာပါပဲ … လွှတ်တော်မတက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ … တက်ခွင့်ရမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေပါသတဲ့ …
ဒီနေ့ခေါ်ယူတဲ့ လွှတ်တော်မှာ … ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရော ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ရော … NLD မတက်ဖြစ်ဘူးပဲ … ။ အဲ့ဒီကျမ်းကျိမ်ရတဲ့ အချက် မပြင်သရွှေ့ NLD လွှတ်တော်ထဲ ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး … ။NLD ကလည်း မပြင်လျှင် မတတ်ဘူးတဲ့ …. ။
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပေမယ့် လွှတ်တော်ထဲ မရောက်သေးသရွေ့တော့ … ဘာမှ လုပ်လို့ မရပြန်ဘူး … ။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် … အချိန်တွေကြန့်ကြာကုန်တယ် …. ။
maung gyi says:
ခဏတော့သီးခံကြပါဗျာ နောက်လာမယ့်လှေခါးထစ်မြင့်မြင့်ကြီးတွေအတွက် ဒီအဆင့်ကအရေးကြီးလို့ပါ…
In this case, I believed that NLD is trying to test the flexibility view of ruling party on changing of constitutional laws in future parliament . It is right that NLD can’t effort to change such small issue , the third article of election campaign’s motto become useless.
အိမ်လွမ်းသူပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဒါစမ်းသပ်မှု တစ်ခု၊ သွေးတိုးစမ်းမှု တစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ်။
ဘယ်သူမှမခန့် ပဲ ကုလားထိုင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေကို ထုတ်ကွာ..
ဒါမှမဟုတ် ဒေါ်စုတောင်းဆိုတာကို လိုက်လျောခိုင်းကွာ
မင်းဒို့ ..ကျေးဇူးမကန်းနဲ့ 
အဘွားကြီးမျက်နှာကြောင့်..ပြောင်ပြောင်ယောင်ယောင် ဖြစ်နေတာ ဘောပေါက်
(ရွာထဲရှိ ကိုကိုပြောင် အူးအူးပြောင်တို့ အား စောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ပြောဆိုခြင်း အလျင်းမရှိပါကြောင်း ရိုးသားစွာ ၀င်ခံပါသည်)
ကြံ့တွေကိုထောက်ခံခိုင်း (ဒါတော့ သေချာပါ့မလား ? )
အကယ်၍ ၇၅% မပြည့်ခဲ့သည်ရှိသော်
vote result ကို ငြင်းလို့၊ မသိယောင်ဆောင်လို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စမှာတော့ ရှိပါစေတော့..။ အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်။
နောင်ကိုတော့ ဒီ risk မျိုးခဏခဏမယူကြပါနဲ့ကွယ်…
မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်လာရန်ကို ကြိုဆိုပါကြောင်း သို့ရာတွင် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိခဲ့သော လွတ်တော်အမတ် နေရာရယူ၍ လွှတ်တော်တက်ရေး မတက်ရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေါ်တွင်သာ မူတည် ပါကြောင်း သတင်းထောက်များသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု AFP သတင်းဌာနက ရေးသားသည်။
ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဆက်လက်ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိသစ္စာ မပြုရသေးသော အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကတိသစ္စာပြုခြင်းနှင့် ကတိသစ္စာပြုလွှာအပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါကတိသစ္စာပြုကြသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ အစားထိုးပြောင်းလဲထားသော တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၀ ဦး၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြသော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးစီတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ကတိသစ္စာပြုချက်တွင်ပါဝင်သော စာသားကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန် အစီအစဉ်မရှိဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သတင်းထောက်များသို့မပြောခဲ့ကြောင်း သမ္မတခရီးစဉ်နှင့်အတူလိုက်ပါသွားသော တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ငါးရက်တာခရီးသွားရောက်ခဲ့သော နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က တိုကျိုတွင်သတင်းထောက်များ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မည်သည့်အချိန်တွင် လွှတ်တော် တက်နိုင်မည်လဲဟု မေးမြန်းမှုများကို ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ထဲဝင်မလာတာ သူ့ရဲ့သဘောဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ကြီးကတော့ သူ့ကို ကြိုဆိုနေပါတယ်”ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဂျပန်စကားပြန်မှတစ်ဆင့် ဖြေကြားခဲ့သည်။ ထိုအဖြေမှာ အပြည့်အစုံဖြစ်ပြီး ကတိပြုချက်စာသားကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန် အစီအစဉ်မရှိဟု မဖြေခဲ့ကြောင်း၊ သတင်းဌာနများက မှားယွင်းဖော်ပြမှုသာဖြစ်ကြောင်းလည်း အဆိုပါတာဝန်ရှိသူက သူ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
် ကြံ့ဖွတ်အတွက် ပကတိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို မြင်ရတဲ့ အာဏာရပ်တည်မှုကို မထိခိုက်တဲ့ အခွင့်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သလို အခုအရေးသည် အန်အယ်လ်ဒီအတွက် စစ်တပိုင်းလွှတ်တော် ရပ်တည်ချက်ကို ရှင်းလင်းစွာ သိနိုင်တဲ့ အခါကောင်းလည်း ဖြစ်တယ်။